» कुशल व्यवस्थापन गरि जनता बचाउ सरकार !
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०८:२८ प्रकाशित
हो म त्यो देशको नागरिक हो । जहाँ कोरोना संक्रमित बिरामी अक्सिजनको अभावमा परमधाम जान बिवश छन । हो म त्यस्तो देशको नागरिक हो । जहाँ संक्रमित जनताहरु जानी नजानी मृत्यु वरण गर्न बाध्य छन । कतिपय संक्रमितले त उपचार अभावकै कारण ज्यान गुमाएको तथ्यहरु सार्वजनिक भईरहेका छन ।
उपचार पाईहाले पनि बाँच्नेहरुको परिवारले अस्पतालहरुमा मोटो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । मानिसको जिवनको अगाडि पैसा नाँथेको कुनै तुलना छैन । खएर यहि पैसाले संक्रमितको ज्यान भने बचाईरहेको छ । किनकी यसको सृजनाकार मानिस नै हो । उसले अहिले गुन तिर्दैछ । उसलाई सादुवाद ।
यो लेखिरहँदा संक्रमित जोगाउन दिनरात खटिएका हाम्रो अवमूल्यन भयो भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएलान । त्यो स्वाभाविक छ । कोभिड बिरुद्ध अग्र मोर्चामा खटिनेहरुको चर्चा त गर्ने बाँकी छ । तपाइहरुको त्याग अनि तपस्या त अतुलनीय छ । जति प्रशंसा गरेपनि अपूरो नै रहन्छ । सलाम फ्रन्टलाईनर स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सलाम ।
नेपालको पुरा जनसंख्यालाई पुग्ने सबै स्वास्थ्यकर्मी हाम्रो देशमा छैनन । र बिश्वका कुरनै पनि देशमा एक नागरिक एक स्वास्थ्यकर्मी असंभव कुरो हो । यो मामिला व्यवस्थापनको हो । कुशल व्यवस्थापकले मात्रै यसलाई पार लगाउन सक्छ । कुशल व्यवस्थापक भएका देशहरुलाई हामी उदाहरणका रुपमा लिन सक्छौँ ।
जस्तो कि छिमेकी मुलुक चीन । हे उ त विश्वकै धनी देश हो । हामी कहाँको उनिहरु कहाँको ? यस्तै–यस्तै प्रश्नहरु तेर्सिएलान । त्यसलाई पनि अति सामान्य रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । चिन धनी छ । त्यहि भएर उसले व्यवस्थापन ग¥यो भनि मान्नेहरुलाई प्रश्नः भारत पनि त धनी देश हो । जनसंख्या पनि चिनलाई टक्कर दिने खालको छ । आणविक शक्ति सम्पन्न मुलुक हो भारत ।
अर्थ व्यस्था माथिल्लो क्रममा छ भन्ने तथ्यले पनि जनता जोगाउन नसकिने रहेछ । त्यसका लागि आवश्यक पर्छ कुशल व्यवस्थापन । जुन सि जिङपिङले गरे । न त मोदीले, न त ट्रम्पले गरे । न त बाईडेनले नै गरे । पछिल्लो तथ्याङ्क नै काफी छ कस्ले के ग¥यो । मृतकको ग्राफले छर्लङ्गै हुन्छ ।
संयोगले यि कुरा लेखिरहँदा कोरोनाले ज्यान गुमाउने मृतकहरुको दरमा नेपालले कोरोनाको उद्गमस्थल मित्र राष्ट्र चिनलाई पनि उछिनेको छ । चिनमा मृतकको संख्या पाँच हजार पनि नपुग्दा मृतक नेपालीको संख्या ५ हजार नाघिसकेको छ । देश कुन हैसियतको ? कति जसंख्याको ? भन्ने पगरीले जनता बचाउने सवालमा अर्थ राखेन ।
अर्थ राख्यो त मात्र कुशल व्यवस्थापनले । यहि देश हो । जुन देशका नागरिकको परिचयले संसार कुनै एक समय थरथर काँप्ने गर्दथ्यो । बिडम्वना वर्तमानमा त्यो बेला थरथर काँप्ने मुलुकहरु नेपालीहरुको त्यो ईतिहाँसलाई सम्मान मात्रै गर्ने गर्दछन । केहि मुलुकहरुले त्यो परिचयलाई अहिलेसम्म पनि सम्मान गर्दे आफ्नो देशको सुरक्षामा उपयोग गरिरहेका छन ।
देश सानै भएपनि व्यवस्थापन सबसे महत्वपूर्ण हो भन्ने तथ्य त्यसले पनि उजागार गर्दछ । त्यसकारण देशको आयातन, अर्थतन्त्रको ग्राफ, जनसंख्या, आदिईत्यादी कै कारण हिनताबोध गर्नुपर्ने र बाहानाबाजी गर्नुपर्ने कुनै जरुरत छैन । पैसो छैन ? व्यवस्था हुन्छ । डाक्टर छैनन ? व्यवस्था हुन्छ । पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी छैनन ? त्यो व्यवस्था हुन्छ । अक्सिजन छैन हजुर ? त्यो पनि व्यास्था गर्न सकिन्छ ।
वस । पूर्ण ईच्छा शक्तिसहितको कुशल व्यस्थापनको यो देश र जनतालाई खाँचो छ । वर्तमानको टड्कारो आवश्यक्ता पनि यहि नै हो ।
यसरी गर्न सकिन्छ कुशल व्यवस्थापन ।
हाम्रो देशमा एउटा उमेर पुरा भएपछि निजामति कर्मचारीदेखि बिज्ञहरु समेत अवकाश लिने गर्दछन । संवैधानिक अङ्गदेखि सरकारी कर्मचारीहरुसम्मको हकमा कानूनमै सो बाध्यकारी नियमको व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो देशमा सरकार चलाउने राजनीतिर्मीहरुको मात्रै उमेर अनुसार अवकाश हुन्न । राजनितीका सवालमा उमेरको बिषयमा लामो बहस गर्न सकिएला ।
तर बिज्ञ, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकहरुको हकमा यो बिषम परिस्थितिमा बिनम्र अनुरोधसहितको निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । अझ प्रष्ट रुपमा भनौ अवकाश प्राप्त बिज्ञ, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकहरुबाट थप सेवा लिनुपर्ने देखिन्छ । यसमा बिभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध बिज्ञ चिकित्सकहरुबाट समेत सेवा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
यो बेला बिज्ञता भएकाहरुलाई मास्क लगाएर चुपचाप घरमै बस्नुपर्ने छुट अवस्था हेर्दा छैन । कुशल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सरकारले बुद्धिमतापूर्ण बोल्ड निर्णय गर्नैपर्ने देखिन्छ । २२ तल्ले धरहरा पुनःनिर्माण गरि उद्घाटन गर्ने आँट देखाएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भण्डै त्यत्रै उचाईको अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता खट्किसकेको छ ।
महामारीको यो जटिल परिस्थितिका बेला म एउटा कुशल व्यवस्थापक हो भनि परिचय दिन प्रधानमन्त्रीलाई समयले घच्घच्याईसकेको छ । रोग प्रतिरोधी क्षमताबारे बिगतमा गलत बोलिएछ भनि स्विकार गरिसकेका प्रधानमन्त्रीलाई अव त्यस्तो गल्ती स्विकार्न पर्ने गरि बोल्ने छुट कुनै हालतमा छैन । प्रधानमन्त्रीलाई छुट छ त केवल कुशल व्यस्थापक बन्ने । अनि जनता बचाउने ।